Yintoni Network Unboxed?
Unboxed – a Market zikawonke
Brands lichitha phezu 36 billion US zeerandi iintengiso media social ngonyaka ngamnye. Ezi ntengiso zidla amaxesha izakulahlwa kwaye ngokuthi abantu. ; Kusenjalo, 9 ngaphandle kwe 10 Umxholo abantu ithemba iposwe ngumntu bayazi. leyo, kulapho Unboxed iza ku. Thina alifani ne-yenza iibrand kunye nabasebenzisi eendaba zoluntu ukudala kunye nesiqulatho ezinxulumene brand post lakwa-. Oku kwenza uthethathethwano ngcono kakhulu, kudala advocacy real brand kunye nelizwi-of-emlonyeni ukusebenza. Kwakhona lixhobisa abasebenzisi kwimidiya yomphakathi.
A Business Ukusebenza
Unboxed i iteknoloji ukusebenza ngokupheleleyo isetyenziswa yi phezu 100+ brand jikelele (nakumathafa US, Khanada, i United Kingdom, Jemani , Dominikha, Norway kunye yeBaltic). phezu 40,000 imigca ye, amakhulu bophindo, inkampani nemveliso iheke unyaka wonke amandla ukuba namhlanje akhulule omkhulu ilizwi-of-emlonyeni campaignsthat kuquka izigidi ngemihla abasebenzisi kwimidiya yomphakathi.
Le Unyango Perfect Companies
Unboxed linikeza unyango ogqibeleleyo kwiinkampani abagulayo kunokuchitha ixesha nemali neenkampani zorhwebo influencer ukuba baxhomekeke iinkqubo olunzulu abasebenzi okufumana i Imfundiso ekunene, yezingxoxo, nezahlulo, nokulawula ubudlelwane. Ezi nkqubo eliphezulu kwebala ukunciphisa inani labasebenzisi zosasazo zasekuhlaleni ngubani na inxaxheba kumaphulo ilizwi-of-umlomo kunye namashishini sivame ukugcina ukusebenza neqela elincinane abasebenzisi kwimidiya yomphakathi – Imfundiso okanye nosaziwayo.
Unboxed into Ukubandakanya bonke
Sacinga ngaphandle kwebhokisi, weza nesisombululo evumela ukuba ufakele ichibi elincinane Imfundiso kunye nezigidi ngemihla abasebenzisi kwimidiya yomphakathi – ngubani esiyibiza Unboxers. Kwakhona endaweni abaphathi phulo iingcali zorhwebo ngubani na ukulawula amawaka amaphulo ngendlela eyaba, ngokuhlanganisa AI nothungelwano ezizimeleyo iingcali zorhwebo. Ngako oko, siya kwenza abasebenzisi zosasazo zasekuhlaleni ukuze babelane ngayo kwimarike $ 36bn.
I-Plan of Unboxed
ishishini lethu kulindeleke ukuba ikhule ukusuka ukusebenza 10 amazwe okwangoku ukusebenza phezu 100 iimarike. Ukukhawulezisa inkqubo siya kwakha iqela 125 izifundiswa ngu 2021. Funda ngokugqithisileyo…
"Ukuba BITCOIN Ngaba akukho UKUBETHA $1 MIL...
UCanzibe 22, 2019
UCanzibe 21, 2019